Shirkada Albayrak Group oo la wareegtay Maamulida Dekkada Muqdisho muddo 20 sano ah! • Horseed
Home » Somali News » Federal Republic of Somalia » Shirkada Albayrak Group oo la wareegtay Maamulida Dekkada Muqdisho muddo 20 sano ah!Shirkada Albayrak Group oo la wareegtay Maamulida Dekkada Muqdisho muddo 20 sano ah!
Posted: Khalid Yusuf - August 26, 2015 Leave a CommentShares
Shirkada laga leeyahay dalka Turkiga ee Albayrak Group ayaa todobaadkan si rasmi ah ulla wareegtay maamulida dekkada weyn ee magaalada Muqdisho, heshiiskaasi oo la sheegay in dowlada Federaalka ugu saxiixday muddo 20 sano ah in shirkadaasi maamusho dekkada caasimada Soomaaliya.
Shirkada Albayrak Group oo iyadu aan si weyn looga aqoon caalamka oo ah shirkad dhismo, ayaa kamid ahayd shirkado la sheegay inay u tartameen maamulida dekkada Muqdisho oo dib u habeyn lagu sameyn doono, isla markaana lagu kordhin doono qeybo ay kusoo xiran karaan maraakiibta waaweyn.
Waxaa horey u jiray shirkado kale oo iyaguna daneenayey dekkada Muqdisho shida shirkada weyn ee maamusha Dekkada Dubai ee DP.
Balse heshiiskan ayaa waxaa horey walaac uga muujiyey shaqaalaha Soomaalida ah ee ka shaqeyn jiray dekkada kuwaasi oo sheegay inay hawshoodii ay la wareegeen shaqaalo turki ah. Bishii lasoo dhaafay ayaa rabshad ka dhacday dekkada gudaheeda lagu dilay mid kamid ah shaqaalaha soomaalida ee dekkada, waxaana dhaawacyo soo gaareen sadex turki ah kadib markii murran uu dhexmaray.
Waxaa dhinaca kale Xildhibaano kamid ah Baarlamaanka Federaalka su’aalo iska weydiinayaan habka loo bixiyey qandaraaska iyo muddada dheer ee 20ka sano ah loo saxiixay shirkada laga leeyahay Dalka Turkiga, taasi oo la rumeysan yahay inay lacag hormaris ah siisay dowlada Soomaaliya.
Dhinaca kale xubno kamid ah Xukuumada ayaa sheegeen in shirkadan qeyb lixaadleh ka qaadan doonto dakhliga Dekkada kasoo xarooda iyadoo in kamid ahna canshuur ahaan loosiin doono dowlada Federaalka Soomaaliya.
Shirkadan ayaa balan qaaday inay dhismo baaxadleh ka sameyn doonto dekkada isla markaana laba jibaari doonto maraakiibta kusoo xiran kara dekkada iyo dakhliga sanadlaha ah. Taasi badelkeedana ay dowlada Soomaliya la wadaagi doonto dakhliga soo xarooda.
Maaha markii ugu horeysay oo shirkad Turkiga laga leeyahay la wareegto illaha Qaranka Soomaaliya, waxaa horey shirkad laga leeyahay Turkiga loogu wareejiyey maamulida Airporka Caalamiga ah ee Muqdisho.
Share Your Comments & Feedback:Warar kale
Minnesota: Taliyihii Booliska Minneapolis oo xilka iska casishey kadib dilkii uu geystey Maxamed NuurJuly 22, 2017 By Hanad Askar
Shirka Isgaarsiinta oo Maalintii Saddexaad Ka Socda KismaayoJuly 22, 2017 By HORSEED STAFFJubaland: Xoosh Jibriil oo Gaarey Kismaayo, Kulamo Wadatashi Dastuurka La Xiriira Halkaas Ku QabanayaJuly 22, 2017 By Mohamed JeenyoMaamulka Falastiiniyiinta oo albaabada xiriirka oo dhan u jarey IsrailJuly 22, 2017 By Hanad AskarAfhayeenkii Aqalka Cad ee Maraykanka Sean Spicer oo is casileyJuly 21, 2017 By HORSEED STAFFQardho oo lagu soo gabagabeeyay tababar la xiriira xeerka ilaalinta iyo maaraynta deegaanka. (Sawiro)July 21, 2017 By Daud Hassan
Minnesota: Taliyihii Booliska Minneapolis oo xilka iska casishey kadib dilkii uu geystey Maxamed Nuur
Shirka Isgaarsiinta oo Maalintii Saddexaad Ka Socda Kismaayo